Min Nay – My Note
Featured by Leiway, posted in Books
Tagged Knowledge, My PoemsLeaveacomment
March 18, 2018 by Leiway, posted in Myanmar
ဗိုလ်တစ်ထောင်စေတီတော် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ရှိသော စေတီတစ်ဆူ ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်တစ်ထောင်စေတီတော်အား ရှေးယခင်က မွန်ဘာသာဖြင့် ကျိုက်ဒေးအပ်စေတီ= ကျာ်ဒဵုအပ် ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းများ ရှိ၏။ မွန်ဘာသာအရ ကျိုက်=ဘုရား၊ ဒေး=ကုန်း၊ အဲ့(အပ်)=သာချင်းသီ၊ ဟု အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုရမည် ဖြစ်၏။ အတိအကျ ဖွင့်ဆိုရလျင် “သာယာသော သီချင်းကို သီဆိုတတ်သူတို့ နေဘူးသောအရပ်” ဖြစ်ခြင်းကြောင့် “သာချင်းသီ စေတီ”ဟု ခေါ်တွင်ရမည် ဖြစ်သည်။
သိင်္ဂုတ္တရကုန်းတော်ရှိ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး၏ အရှေ့တောင်ယွန်းယွန်း၊ တာတစ်ထောင်အကွာ တွင်ရှိသော မြစ်ဆိပ်အနီး၌ မဟာသစ္စသေနာပတိ အမတ်သူရဲကောင်း၏ ဆရာဖြစ်သော ကျောင်းကုန်းရဟန်းတော်မှ ကြီးကြပ်တည်တော်မူသည့် ဘုရားမှာ မူလက ကျိုက်ဒေးအပ် ဟူသောဘွဲ့မည်မှ ယခု ဗိုလ်တထောင် ဆံတော်ဦးစေတီဟူသည့် ဘွဲ့မည်နှင့် ထင်ရှားလျှက်ရှိသည်ဟု သမိုင်းအဆို ရှိသည်။
ကျိုက်ဒေးအပ် ဘွဲ့မည်ရှိသော ဗိုလ်တထောင် ဆံတော်ဦးစေတီ၏ သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာလျှင် ဤထူးမြတ်သည့် နေရာ၌ ဘုရားရှင်၏ ဆံတော်၊ ဓာတ်တော်များအား အကြိမ်ကြိမ် ဌာပနာပြုလျှက် သုံးကြိမ်တိုင် တည်ထားတော်မူသော စေတီဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
(က) ထိုစဉ်က ကုန်သည်ညီနောင်ဖြစ်သည့် တဖုဿ နှင့် ဘလ္လိက တို့သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ဆံတော်မြတ်တို့အား ဥက္ကလာပ ဆိပ်ကမ်းက ကြိုဆိုပင့်ဆောင်လျက် (၇)လတိုင် မင်းနှင့် ပြည်သူအပေါင်းတို့မှ ပူဇော်ပွဲကြီး ကျင်းပခဲ့ရာ ရတနာ မဏ္ဍပ် နေရာအား ရွေးချယ်သတ်မှတ်ကာ “ကျိုက်ပါ” ဘွဲ့မည်ဖြင့် စေတီတစ်ဆူ တည်ထားခဲ့၏။ ဤစေတီကား နောင်တွင် ဗိုလ်တထောင် ကျိုက်ဒေးအပ်ဆံတော်ဦး စေတီတွင်၏။ ထိုသို့ ဘုရားရှင်ထံမှ ဦးစွာရရှိခဲ့သည် ဌာပနာပြု တည်ထားခြင်းကြောင့် ဆံတော်ဦး စေတီအဖြစ် ယနေ့တိုင် ခေါ်တွင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ)ဆံတော်ဦးစေတီ ဒုယတိအကြိမ် တည်ထားပုံမှာ ကျိုက္ကဆံ စေတီတော်မြတ်ကြီးအား တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည့် သမိုင်းကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း အမှတ်အသားများ တွေ့ရ၏။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ရဟန္တာမြတ် နှစ်ထောင်ခြံရံလျက် သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ (သထုံ) သို့ ဒေသစာရီကြွချီစဉ် တြိဝင်္ဂကျွန်းမှ ရသေ့ခေါက် အပါအဝင် အကြီးအမှူးရသေ့များအား ဆံတော်မြတ် များ ပေးသနားခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် သုဝဏ္ဏ(သထုံ) ပြည့်ရှင် သီရိဓမ္မာသောက တိဿဓမ္မသီဟရာဇာမင်းသည် ကိုးကွယ်ရန်လို့ငှာ ဘုရားရှင်အား ဆံတော်မြတ် ပေးသနားရန် တောင်းပန်လျှောက်ထား၏။ ဘုရားရှင်က အချိန်မကျသေး သဖြင့် “ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူလျှင် စန္ဒကူးနံ့သာပုံအတွင်းမှ သုံးဆယ့်သုံးဆူ သော သွားတော်မြတ်ဓာတ်တို့အား အရှင်ဂဝံပတိ ရဟန္တာအရှင်မြတ် မှ ပင့်ဆောင်လျက် ပေးလိမ့်မည်ဟု မိန့်ခဲ့၏။ ပြည့်ရှင်မင်းသည် ဘုရားရှင်အား ဒုတိယအကြိမ် တောင်းပြန်၏။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်သည် သင်္ခါရတရားအရ သေဘေးနှင့်ကြုံနိုင်သဖြင့် ပူဇော်နိုင်ရန် ဆံတော်မြတ်အား ပေးသနားပါ”၊ ထိုအခါ ဘုရားရှင်က ဤအချိန်သည် ချီးမြှင့်ရန် အချိန်တန်ပြီဟု ဆုံးဖြတ်သဖြင့် သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ(သထုံ) ပြည့်ရှင်မင်းအား ဆံတော်မြတ်နှစ်ဆူ ပေးသနားတော်မူ၏။ သိရီမာသောကတိဿဓမ္မသီဟရာဇာမင်းသည် မိမိရရှိ သည့် ဆံတော်မြတ်နှစ်ဆူအနက် တစ်ဆူအား သင်္ဂနိတ်တောင် (ခေါ်) မြသပိတ်တောင်ပေါ်ရှိ မြသပိတ်စေတီတော်၏ မြောက်ဘက်၌ စေတီတည်ထားတော်မူ၏။
ကျန်ရှိသည့် ဆံတော်မြတ် တစ်ဆူအား သူရသေန အမတ်ကြီးအား အပ်နှင်းလျက် သင့်လျော်သည့် နေရာတွင် စေတီတည်ထားစေ၏။ သူရသေန အမတ်ကြီးသည် သိင်္ဂုတ္တရကုန်းတော်ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး ၏ အရှေ့တောင် ထောင့်တာ တစ်ထောင်ခန့်အကွာ၌ တည်ရှိသော မူလက တဖုဿ နှင့် ဘလ္လိက ကုန်သည်ညီနောင်တို့ ပင့်ဆောင်လာသည့် ဆံတော် (၈)ဆူခေတ္တကိန်းဝပ်စံပါယ် အပူဇော်ခံ တော်မူရာ နေရာတော်မြတ်၌ တစ်ဆူဌာပနာလျက် တည်ထားခဲ့ သော ကျိုက်ပါစေတီ (ခေါ်) ဗိုလ်တထောင်စေတီတော်၌ ဌာပနာပြုလျက် မူလစေတီတော် အားလည်း မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့၏။
(ဂ)တတိယ တည်ထားခဲ့သည်ကို လေ့လာလျှင် သမိုင်းစဉ်အရ သီဟဒီပမင်းကြီး ၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှုအရ ရဟန္တာရှစ်ပါး တို့သည် ကျိုက္ကဆံစေတီတော်အား ဦးစွာတည်ထားပြီးနောက် အမတ်သူရဲ ကောင်း ဆယ်ဦးအား တစ်ဦးလျှင် စေတီတစ်ဆူကျ တည်ထားရန် လမ်းညွှန်တာဝန်ပေးချက်အရ “မဟာသစ္စ သေနာပတိ အမတ်သူရဲကောင်း” သည် ဆရာဖြစ်သူ ကျောင်းကုန်း ရဟန်းတော်၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် မူလ ကျိုက်ပါစေတီ ခေါ် ဗိုလ်တထောင်ဆံတော်ဦး စေတီတော်မြတ်၌ပင် ဆံတော်တစ်ဆူ နှင့် ဓာတ်တော်မြတ်များ ဌာပနာပြီး စေတီတော် အားလည်း မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ စေတီတော်၏ ဘွဲ့မည်ကိုလည်း ကျိုက်ဒေးအပ် စေတီဟု ခေါ်တွင်ပြန်၏။ ဤသို့ဖြင့် ဗိုလ်တထောင် ကျိုက်ဒေးအပ် ဆံတော်ဦး စေတီတော်ကြီးသည် –
သူရသေနအမတ် ဌာပနာခဲ့သည့် ဒုတိယ ဆံတော်တစ်ဆူ
မဟာ မစ္စသေနာပတိ အမတ် ဌာပနာခဲ့သည့် တတိယဆံတော် တစ်ဆူ စသည်ဖြင့် ပေါင်းဆံတော်မြတ် သုံးဆူ နှင့် ဓာတ်တော်မြတ်များ သုံးကြိမ်တိုင် ဌာပနာလျက် တည်ထားသည့် သုံးဆူ ဆံတော်ဦးစေတီတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်တထောင် ဆံတော်ဦးစေတီသည် ဥက္ကလာပမင်းကြီး အမှူးပြုလျက် တဖုဿ နှင့် ဘလ္လိက ကုန်သည်ညီနောင် တို့မှ၎င်း၊ သထုံပြည့်ရှင် သီရိဓမ္မာသောကတိသဓမ္မ သီဟရာဇာ မင်းမြတ်မှ၎င်း၊ သံလျင်မဏိဒီပကျွန်း ဘောဂသေနဘွဲ့ သီဟဒီပမင်းတို့၏ အထောက် အပံ့ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် တည်ထားတော်မူခဲ့ရုံသာမက တောင်ငူ တပင်ရွှေထီးမင်း၊ စဥ့်ကူးမင်း၊ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် ရွှေကျင်မင်းကြီး၊ ဘကြီးတော်ဘုရားလက်ထက်၌ ရန်ကုန်မြို့ဝန် ဦးခိုင်နှင့် ကုန်းဘောင်မင်း အဆက်ဆက်တို့မှ အဆက်ဆက် ပြုပြင် မွမ်းမံခဲ့ကြ၏။
၁၉၄၃ ခုနှစ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဗုံးဒဏ်ကြောင့် စေတီတော်ကြီးမှာ မြေခပျက်စီးခဲ့ရ၏။ ၁၃၀၉ -ခု၊ ကဆုန် လဆန်း ၁၂ ရက်၊ (၁-၅-၄၇) ခုနှစ် နံနက် ၆နာရီ အချိန်၌ ဗုံးကျပျက်စီးသည့် အုတ်ပုံများအား ရှင်းလင်းမှု ပြုကြရာမှ မူလပြတိုက် ဌာပနာအတွင်းမှ ဗုဒ္ဓဆံတော်မြတ်အား ဖူးတွေ့ခွင့် ကြုံခဲ့ရ၏။ ဗုဒ္ဓဆံတော်မြတ်အား ဂဝံကျောက်စေတီ ၊ နံ့သာကျောက် စေတီ၊ ရွှေစေတီတို့ နှင့် အထပ်ထပ်ရံလျက် သရိုးဖြင့် ခွေလုံးကာ ရွှေချပူဇော်ထား၏။ ဆံတော်မြတ်ဌာပနာထားသည့် ကျောက်စေတီအား ယနေ့တိုင် ဗိုလ်တထောင် ကျိုက်ဒေးအပ် ဆံတော်ဦးစေတီမှာ ဌာပနာတိုက်အဝင်ဝ၌ ဖူးတွေ့နိုင်၏။ ထို့အတူ ဆံတော်မြတ်တို့အား ဆံတော်တွင်း၌ အပူဇော်ခံလျက် ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဆာဦးသွင်နှင့် အစိုးရမှ ဦးစီးပြီး အသစ်တဖန် ပြုပြင်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရား ပြုပြင်ခဲ့ ရာတွင်လည်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု နှင့် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် တို့သည်လည်း ပါဝင် ဦးဆောင် ခဲ့သည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှု ဖြင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအား လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ဤဘက်ခေတ်တွင် ဗိုလ်တထောင် ဆံတော်ဦး စေတီတော် သမိုင်းနှင့် မြနန်းနွယ်၏ သမိုင်းစဉ်သည်လည်း ယှဉ်လျက် ပါလာသည်ကို တွေ့ရသည်
↑ ဗိုလ်တစ်ထောင်စေတီတော် မဟာသမိုင်းကြီး (ဘုံပျံဆရာတော် ဦးပညာသာမိ)
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မှာ ၃၂၆ ပေ မြင့်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ သိင်္ဂုတ္တရ ကုန်းတော်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံဟုလည်း ခေါ်တွင်သည်။ စေတီအစ ရွှေတိဂုံက ဟုဆိုကြသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းကို မွန်လူမျိုးတို့သည် ဒဂုံတိုင်းဟု သမုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒဂုံတိုင်းမှာ တည်ထားသော ဘုရားဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် ဒဂုံတိုင်းကဘုရားဟု ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ မွန်ဘာသာဖြင့် ကျာ်ဒဂုင် ဟုရေးသားပြီး ကျိုက်ဒဂုံဟုအသံထွက်ဆိုခဲ့ကြသည်။ တတိယမြန်မာနိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့သော အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်တွင် မွန်တို့ကို တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီးနောက် ဒဂုံကို ရန်ကုန်ဟု အမည်နာမ ပြောင်းလည်ခဲ့သည်။ ကျိုက်လဂုံကို ကျိုက်ဒဂုံ ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ကျိုက်လဂုံ(သို့) ကျိုက်ဒဂုံသည် မြန်မာပြည်၏ မူပိုင်သင်္ကေတ အဖြစ်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ မူပိုင်ကျိုက်ဆိုသော စကားလုံးနေရာတွင် ရွှေနိုင်ငံ (Golden land) ကို ကိုယ်စားပြုသော ရွှေ ဆိုသော စကားလုံးဖြင့် အစားထိုးခဲ့ကြသည်။ ထို့အတူ လဂုံ လိုလို ဒဂုံ လိုလို ဖြစ်နေသောစကားလုံးကိုလည်း တိဂုံ ဖြင့် အတည်ပြုပေးလိုက်ကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျိုက်လဂုံ သည် မြန်မာပြည်တွင်မှာ သာမက ကမ္ဘာ့တဝှမ်းမှာ ရွှေတိဂုံ ဟူသော အမည်နာမဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာ သည် (ခရစ်တော်မပေါ်မီ ဘီစီ(၅၈၈) လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၂၆၀ဝ ကျော် မဟာသက္ကရာဇ်(၁၀၃)ခု ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် စတင် ပွင့်ထွန်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃)ခု ဝါဆိုလပြည့် စနေနေ့ ဘီစီ(၅၈၈)မှာ ဓမ္မရတနာ စတင်ခဲ့သည်။ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃)ခု ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၂ ရက် တနင်္လာနေ့ ဘီစီ (၅၈၈) တွင် သံဃာရတနာ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ ဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဝိပဿနာ ကျင့်စဉ်ကိုဘီစီ (၅၈၈) လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၂၆၀ဝ-ကျော်တွင်ပထမဆုံးသော စတင်တွေ့ရှိကျင့်ကြံအားထုတ် ခဲ့ သူဖြစ်သည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ဘုရားအဖြစ်နှင့် (၄၅)နှစ်နေပြီး မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ ခု ကဆုန်လပြည့် အင်္ဂါနေ့ ဘီစီ ၅၄၃ မှာ ပရိနိဗ္ဗာန် စံလွန်တော်မူသည်။ ဗုဒ္ဓအဖြစ် ၄၅ နှစ်အတွင်း တာဝန်ကြီး ၂ ရပ်ကို တစ်နေ့လျှင် ၂၂ နာရီ မိနစ် ၂၀ ခန့်မျှ နေမအား ညမနား လူသား, သတ္တဝါတို့၏ ကောင်းကျိုးကို မျှော်ကိုး၍ ထမ်းဆောင်တော်မူခဲ့သည်။ သဗ္ဗညု မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ဗောဓိပင်ရင်း သတ္တဌာန၌ (၇)ရက်စီ အလှည့်ကျစံတော်မူပြီး (၄၅)ရက် သီတင်းသုံး နေတော်မူ ခဲ့သည်။ ဤသို့ နေတော်မူ (၄)ရက်ပြည့်မြောက်ပြီး နောက် တစ်နေ့၌ “ရာပဒတန်သတ္တဟ” ဖြစ်သည့် လင်းလွန်းပင်ရင်း၌ သီတင်းသုံး စံတော်မူစဉ်ကာလ။ ဗုဒ္ဓဝင် သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်လျှင် ဂေါတမဘုရားရှင် လက်ထက်၌ မြန်မာနိုင်ငံ တဖုဿနှင့် ဘလ္လိက ကုန်သည်ညီနောင်တို့သည် ထူးခြားစွာ ဘုရားရှင်အား ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံး ဆွမ်းကပ်ရသူ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံး သရဏဂုံ တည်သူများ နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ခဲ့၏။
ဘီစီ (၅၈၈)၌ မွန်တို့ဌာနေ၊ ဥက္ကလာပမင်းကြီး၏ နိုင်ငံတော်တွင် ပါဝင်သော အသိဉ္စနမြို့၌ သုဝဏ္ဏအမည်ရှိသော သူဌေးကြီးတစ်ဦးရှိလေသည်။ ထိုသူဌေးကြီးတွင် တပုဿနှင့် ဘလ္လိက ဟူသော သားနှစ်ယောက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ကုန်သည်များ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းကုန်သည် ညီနောင်တို့သည် ကုန်များကို သင်္ဘောဖြင့် တင်ဆောင်ကာ မဇ္ဈိမဒေသသို့ ကုန်ရောင်းသွားကြသည်။ မဇ္ဈိမဒေသပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်သောအခါ သင်္ဘောကို ဆိုက်ကပ်ကျောက်ချ၍ ကုန်များကို လည်းအစီးပေါင်း (၅၀ဝ)ပေါ်သို့ တင်ဆောင်ကာ မဇ္ဈိမဒေသ၌ လှည့်လည်ရောင်းချကြသည်။ တဖုဿ ဘလ္လိက ကုန်သည်ညီနောင်အဖွဲ့သည် ဗောဓိပင်အနီးသို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့ကြ၏။ ကုန်သည်တို့ မဟာဗောဓိပင် အနီးသို့ရောက်ပြီး တစ်နေ့ သို့မဟုတ် တစ်ည၌ ရုက္ခစိုးနတ်သည် ကုန်သည်ညီနောင်အား ကိုယ်ထင်ပြခဲ့၏။ ကုန်သည်ညီနောင်တို့သည် ရုက္ခစိုးနတ်အား မြင်လျှင် အံ့ဩသွားကြ၏။ အသင်မည်သူနည်း ဟုမေး၏။
ရုက္ခစိုးနတ်က “အမောင်တို့ နားထောင်လော့ ကျွန်ုပ်က တခြားမဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်သည် ဟိုးဘဝက အမောင်တို့နှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်ခဲ့သူများ ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် ဟိုးရှေးဘဝက ကောင်းမှုကောင်းကျိုးများ ပြုခဲ့သူ ဖြစ်သဖြင့် ယခုဘဝတွင် ရုက္ခစိုးနတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမောင်တို့ ယခု သင်တို့ထံသို့ ရောက်ခဲ့သည်မှာ သင်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်သည် ယခင် ဘဝဆွေမျိုးတော်စပ်ဖူးသူ ဖြစ်သဖြင့် သင်တို့အား အကျိုးပြုရန် ဤသို့ ကိုယ်ထင်ပြရခြင်းဖြစ်သည် အမောင်တို့” ဟုပြောသည်။ ကုန်သည်ညီနောင်က “အသင်က မည်သို့ အကျိုးပြုဖို့လာသနည်း”ဟု ရုက္ခစိုးနတ်ကို မေး၏။ ထိုအခါ ရုက္ခစိုးနတ်က”နားထောင်လော့ အမောင်တို့ ကျွန်ုပ်သင်တို့အား အကျိုးပြုသည်ဆိုသည်မှာ အခြားမဟုတ်ပါ။ ပြောရလျှင် အမောင်တို့ ရောက်ရှိနေသည့် မဇ္ဈိမဒေသတွင် သုံးလောကထွဋ်ထား ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟာ ပွင့်တော်မူပြီး လင်းလွန်းပင်ခြေရင်းမှာ သီတင်းသုံး စံတော်မူနေတာမို့ အမောင်တို့ သွားရောက် ပူဇော်လော့ တိုက်တွန်းလမ်းညွှန်လိုတယ် အမောင်တို့”ဟုဆိုလျှင် တဖုဿနှင့် ဘလ္လိက ကုန်သည်ညီနောင်တို့ အလွန်တရာ ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးသွားကြ၏။ ချက်ခြင်းပင် “ဒါဆို ကျွန်ုပ်အား လမ်းညွှန်ပြပါ ရုက္ခစိုးနတ်” ဟုပြော၏။ ထို့နောက် ရုက္ခစိုးနတ်သည် တဖုဿနှင့် ဘလ္လိက ကုန်သည်ညီနောင်တို့အား ဘုရားရှင် သီတင်း သုံးရာ လင်းလွန်းပင်အား လမ်းညွှန်ပြခဲ့၏။ သည်အခါ ကုန်သည် ညီနောင်တို့သည် သဒ္ဒါပီတိအပြည့်နှင့် ဘုရားရှင် သီတင်းသုံးရာ လင်းလွန်းပင်ရင်းသို့ သွားကြ၏။ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား မုန့်ကြွပ်ကြော်၊ ပျားမုန့်ထုပ် တို့နှင့် ဘုရားရှင်အား လှူဒါန်းပူဇော်ခြင်းပြု၏။
ကုန်သည်ညီနောင်တို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား မုန့်ကြွပ် ကြော်၊ ပျားမုန့်ထုပ်တို့နှင့် ပူဇော်သက္ကာကပြု လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်မှ ဤသို့ လှူဒါန်းပူဇော်ခဲ့သည့်အတွက် ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံသရဏ ဂစ္ဆာမိ ဟူသည့် “ဒွေဝါစိက” သရဏံဂုံ တည်ခဲ့ကုန်၏။ ထိုစဉ်က ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ တည်းဟူသည့် ရတနာနှစ်ပါးသည်သာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး၊ သံဃာရတနာသည် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေ။ ထို့ကြောင့် လူသူအများသည် ရတနာနှစ်ပါးအားသာ ဆည်းကပ်ပူဇော်နေကြကုန်၏။ ဗုဒ္ဓဝင်သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်လျှင် ဂေါတမဘုရားရှင် လက်ထက်၌ တဖုဿနှင့် ဘလ္လိက ကုန်သည်ညီနောင်တို့သည် ထူးခြားစွာ ဘုရားရှင်အား ပထမဆုံး ဆွမ်းကပ်ရသူနှင့် ပထမဆုံး သရဏဂုံ တည်သူများ ဖြစ်ခဲ့၏။
ဘုရားရှင်အား ပူဇော်ခွင့်၊ ဆွမ်းကပ်ခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက် ပီတိဖြစ်ခဲ့ရသည်။ တဖုဿနှင့် ဘလ်္လိက ကုန်သည်ညီနောင်တို့သည် ဆွမ်းကပ်လှူပူဇော်ပြီးလျှင် “အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့ အရှင်မြတ်ဘုရားအား ထာဝရကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပူဇော်နိုင်ရန် ဘုရားရှင်ကိုယ်စား ပူဇော်ရာ တစ်ခုအား ပေးသနားတော် မူပါဘုရား” ဟုလျှောက်ထား လေ၏။ “ကောင်းပြီးချစ်သားတို့” မိန့်တော်မူပြီး သကာလ ဦးခေါင်းတော်အား သုံးသပ်ပြီး ဆံတော်မြတ် (၈)ဆူအား ကုန်သည်ညီနောင်တို့ အားပေးသနားတော်မူရာ တဖုဿနှင့် ဘလ္လိက ကုန်သည် ညီနောင်တို့သည် ဝမ်းမြောက်ပီတိ အပြည့်နှင့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ ဆံတော်(၈)ဆူအား သင်္ဘောနှင့်ပင့်ဆောင်ကာ ဥက္ကလာပတိုင်းပြည် သို့ ပြန်ခဲ့၏။ တဖုဿနှင့် ဘလ္လိက ကုန်သည်ညီနောင်တို့ ဘုရားရှင်၏ ဆံတော်(၈)ဆူအား ပင့်ဆောင်ကာ ဥက္ကလာပတိုင်းပြည်သို့ ပြန်လာလျှင် ဥက္ကလာပတိုင်း၏ ပြည့်ရှင်မင်းမြတ် ဥက္ကလာပမင်းကြီး နှင့်တကွ ပြည်သူတို့က သောင်းသောင်းဖျဖျကြိုဆိုကာ ဖူးမျှော် ကြည်ညိုကြ၏။
ထို့အတူ ဆံတော်(၄)ဆူအား စေတီတော်အဖြစ် တည်ထား ကိုးကွယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြ၏။ စေတီတော်အား သိင်္ဂုတ္တရကုန်းတော် ၌ တည်ထားကိုးကွယ်ရန် မင်းနှင့်ပြည်သူတို့က ဆုံးဖြတ်ပြီး သိင်္ဂုတ္တရ ကုန်းတော်သို့ ပင့်ဆောင်ခဲ့၏။ သိင်္ဂုတ္တရကုန်းတော် သို့ရောက်လျှင် ဗုဒ္ဘုရားရှင်၏ ဆံတော်(၄)ဆူအား ကြီးကျယ်ခန်းနားသည့် စံကျောင်း၊ မဏ္ဍာပ်ကြီး ဆောက်လုပ်၍ပူဇော်ခဲ့သည်။ ယင်းစံကျောင်း မဏ္ဍာပ်နေရာ၌ အထိမ်းအမှတ်စေတီတစ်ဆူ တည်ထားခဲ့ကြ၏။ ထိုစေတီသည် နောင်တော်ကြီးစေတီဟု အမည်တွင်၏။
စေတီတော်ကြီး၌ ဘုရား ၄-ဆူ၏ ဓာတ်တော်မြတ်လေးဆူကို ဌာပနာထားသည်ဟု အဆိုရှိသည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတို့၏ ဆံတော်မြတ်၊ ဓာတ်တော်မြတ်တို့အား ရန်သူတို့ အလွယ်တကူ မဖျက်ဆီးနိုင်ရန်အတွက် နတ်တို့သည် ဌာပနာ တိုက်ထည့်သွင်းတည်ရန် ကြံရွယ်ပြီး သိင်္ဂုတ္တရကုန်းတော် အလယ်တည့်တည့်၌ ဇောက် ၄၀၄တောင်၊ အနံ ၄၄ တောင်ရှိသည့် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုတူးခဲ့၏။ ထိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်း၌ဆူးလေနတ်ကြီးထံမှ ရရှိသော ကကုဿန်မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ တောင်ဝှေးတော်
ရောဟဏီမည်သော ဗိုလ်တထောင်နတ်ကြီးထံမှ ရရှိသည့် ကောဂမန မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ရေစစ်တော်
ဒက္ခိဏ မည်သော သင်္ကန်းကျွန်း ကျိုက္ကဆံ နတ်ကြီးထံမှ ရရှိသည့် ကဿပမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ရေသနုပ်သင်္ကန်းတော်မြတ်
တဖုဿနှင့် ဘလ္လိက ညီနောင်တို့ထံမှ ရရှိသော ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဆံတော်မြတ်(၄)ဆူအား မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ခုနှစ်၊ တပေါင်း လပြည့်နေ့၌ ကျောက်ဖျာအခင်းအကာများ ပြုလုပ်၍ ဌာပနာတိုက် ထည့်သွင်းတော်မူခဲ့သည်။ ထိုဆံတော်ဓာတ်တို့ကို ‘အမြိဿရ’ မည်သော မှော်ဘီနတ်ကြီးက စောင့်ရသည်ဟု မော်ဓော ရာဇာဝင်သမိုင်းနှင့် ရွှေတိဂုံသမိုင်း၊ အခြား ပညာရှိတို့ကဆိုကြသည်။ ထို့နောက် ကျောက်ဖျာတိုက်၏ အထက် ၌ ကျောက်ဖျာတင်၍ ဌာပနာတိုက်အား ပိတ်ခဲ့၏။
ဥက္ကလာပမင်းကြီးနှင့် ပြည်သူများပူးပေါင်း၍ ဌာပနာ တိုက် ကျောက်ဖျာအထက်၌ ဉာဏ်တော်(၄၄)တောင် အမြင့်ရှိသည့် စေတီတော်မြတ်တစ်ဆူအား တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပြီး ထိုစေတီအား “တိဂုမ္ဗစေတီတော်”ဘွဲ့ချီမော်ကွန်း ထိုးခဲ့၏။ ထို တိဂုမ္ဗစေတီတော်သည် ဂေါတမဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်မှာ ကမ္ဘာမြေပြင်တွင် ပထမဦးဆုံးစေတီဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ “သာသနာအစ ရွှေတိဂုံက”ဟု ကဗ္ဗည်းထိုး မော်ကွန်းတင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သတည်း။
သန်းဝင်းလှိုင် (၂ဝဝ၉ ခု၊ မေလ). ၂၀ရာစု မြန်မာ့သမိုင်း. ကံကော်ဝတ်ရည် စာပေ.
၄.၀ ၄.၁ မြတ်ဘုရားရွှေတိဂုံ. ၃၆၁၊ ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့: စာပေဗိမာန်.
March 15, 2018 by Leiway, posted in Myanmar
Myanmar seven State
`ပန်း´ဟူသော ဝေါဟာရ၏ မူလဘူတ အရင်းအမြစ်မှာ `ပန်´ဖြစ်ကြောင်း စာပေပညာရှင်များက ဖေါ်ထုတ်ထားကြသည်။ `ပန်´၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်သည် ဖန်တီးသည်။ ဖန်တီးချက်လက်ရာ၊ ဖန်တီးသူ ဟူ၍ သိရသည်။ အနုပညာလက်ရာတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာရန် တွေးတောကြံစည်ရခြင်း ကဏ္ဍသည် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပန်းအလုပ် ဖြစ်သည် ဟုဆိုပါသည်။ “ပန်း”ဟု ပညတ်ခေါ်ဆိုကြသည်မှာ မွမ်းမံခြယ်လှယ် စီမံရသော သုခုမအနုပညာ ပါသော လုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် သုခုမအနုပညာကို တင်စား၍ ခေါ်ကြောင်း အချို့ပညာရှိများက ယူဆကြသည်။သုတေသီအချို့က “ပန်”ဟု ရှေးကခေါ်ဆိုသောစကားမှာ ပညာလုပ်ငန်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ကြောင်း တိဗက်ဘာသာ၊ တရုတ်ဘာသာ၊ ချင်းဘာသာ စသည်တို့ဖြင့် ကိုးကားတင်ပြကြသည်။
ပန်းဆယ်မျိုးဆိုသည်မှာ မြန်မာ့သုခုမ အနုပညာရပ်များဖြစ်သည့်
ဘုရားမတင်၊ နတ်မဝင်၊ လူတွင် ဆယ်ပွင့်ပန်း(သို့)ဘုရားမတင်၊ နတ်မဝင်၊ လူတွင် ပန်းဆယ်မျိုး ဟုလည်း ခေါ်စမှတ်ပြုသည်။
ရာဇောဝါဒကျမ်းတွင် ပဲ၊ ထိမ်၊ တဉ်း၊ တော့၊ ရန်၊ ပု၊ မော့၊ မှတ်လော့ ပွတ်ချီယွန်း ဟူ၍ ဖွဲ့ဆိုထားသည်။
ထိမ် = ပန်းထိမ်(ရွှေငွေ စသည့်လက်ဝတ်တန်ဆာမှစ၍ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိးကို သွန်းထု ခတ်လုပ်သည့်ပညာ)
တဉ်း = ပန်းတဉ်း(ကြေးထည် ပုံစံအမျိုးမျိုး သွန်းလုပ်သည့်ပညာ)
တော့ = ပန်းတော့(အင်္ဂတေ၊ သရွတ်ဖြင့် ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွ အမွှမ်းတင်တန်ဆာ ပြုလုပ်သောပညာ)
ရန် = ပန်းရန်(အုတ်၊ အင်္ဂတေတို့ဖြင့် အဆောက်အဦ တည်လုပ်သည့်ပညာ)
ပု = ပန်းပု(သစ်သား၊ ဆင်စွယ်၊ ဖယောင်း စသောဝတ္တုပစ္စည်းများကို ရုပ်လုံးရုပ်ကြွ ထွင်းထုသည့်ပညာ)
ပွတ် = ပန်းပွတ်(သစ်သား၊ ဆင်စွယ် ပစ္စည်းများကို လိုရာပုံစံအတိုင်း ချောမွတ်အောင် ပွတ်ခံပြုလုပ်သည့်ပညာ)
ချီ = ပန်းချီ(ဆေးရေး၊ ခဲရေး ရုပ်ပုံ ရေးခြယ်သည့်ပညာ)
ယွန်း = ပန်းယွန်း(သရိုးဖြင့် ပန်းနှင့် ရုပ်ကြွတင်၍ ပြုလုပ်သည့်ပညာ။ ယွန်းထည်ပညာ၊ ပန်းထိုးယွန်း ဟုလည်းခေါ်သည်။)
ပန်းဆယ်မျိုးသည် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာတွင် အဓိကအကျုံးဝင်သော ပညာရပ်များဖြစ်သည်။ ပန်းဆယ်မျိုးမှာ အနုပညာ၏ လေးနက်သိမ်မွေ့ပြီး ခက်ခဲနက်နဲသော သဘောကို ဆောင်သည်။
ပန်းဆယ်မျိုး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော အချိန်ကာလကို အချို့ပညာရှိများ ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်မှာ ပုဂံပြည် ကျန်စစ်မင်းကြီး လက်ထက်တွင် ဖြစ်မည်ဟု ဆိုပါသည်။ မြန်မာရာဇဝင်နှင့် ကျောက်စာဟောင်းများအရ ဆိုပါမူ အနော်ရထာမင်းစောသာလျှင် မြန်မာရာဇဝင်တွင် ဘုန်းအကြီးဆုံးဘုရင်ဖြစ်၍ အနော်ရထာမင်းလက်ထက်ကပင် ပညာသည်များ စုံလင်စွာ ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။
တနည်းအားဖြင့် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်လျှင် အနော်ရထာမင်းလက်ထက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် သက်ဆိုင်သော စေတီပုထိုးများကိုသာ အများအပြားတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျန်စစ်သားလက်ထက် ရောက်လာသောအခါ၌လည်း ဂူ၊ ကျောင်း၊ တန်ဆောင်း၊ ပြာသာဒ် အဆောက်အဦများကို ဆက်လက်ဆောက်လုပ်၍ အနုပညာလုပ်ငန်းများကို အားပေးချီးမြှောက်လာခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။ သထုံပြည်မှ မနူဟာမင်းနှင့် အတူပါခဲ့သော မွန်အနုပညာသည်များ၊ အိန္ဒိယမှ လာသောအနုပညာရှင်များနှင့် ရှေးဟောင်း ပျူအဆက်အနွယ် အနုပညာရှင်တို့ စုံစုံလင်လင် ထပ်ဆင့် စုပေါင်း တီထွင်ခဲ့ကြရာ ပန်းဆယ်မျိုးဟု ခေါ်သော အနုပညာလုပ်ငန်းများသည် ထိုခေတ်ထိုအချိန်တွင် အပြိုင်အဆိုင် တိုးတက်ပေါက်ပွားလာခဲ့သည်ဟု ယူဆရပါသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာ့သုခုမ အနုပညာလုပ်ငန်းရပ်များသည် ပုဂံခေတ်မှ စတင်တိုးတက်လာသည်ဟု အကြမ်းအားဖြင့် မှန်းဆသင့်ပါသော်လည်း မြန်မာလူမျိုးဟု ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါက်မလာမီ ပျူခေတ်ကပင် ပိသုကာ အတတ်၊ ပန်းပု၊ ပန်းပဲ၊ ပန်းတော့၊ ပန်းတမော့ စသော အတတ်ပညာများ ထွန်းကားခဲ့ကြောင်းကို သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်းမှ တူးဖေါ်ရရှိခဲ့သော ပျူအရိုးအိုးများ၊ ကျောက်ချပ်ရုပ်ပွားတော်ကြီးများ၊ ကျောက်အုတ်တို့ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သော ဘောဘောကြီးဘုရား၊ လေးမျက်နှာဘုရား၊ ဘုရားမာ စသော ပုထိုးကြီးများနှင့် ရွှေငွေတို့ဖြင့် ထုလုပ်ခဲ့သော ရုပ်ထုရုပ်ပွားတော်များ စသည့် အနုပညာရပ်များကို တွေ့ရှိရခြင်းဖြင့် ပျူခေတ်ကာလ အချိန်ကပင် ထိုအနုပညာရပ်များရှိပြီး ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သို့သော် ပုဂံခေတ်သို့ ရောက်ချိန်တွင် ပိုမိုတိုးတက် ကြီးပွားလာသည်ဟု ယူဆသင့်ပါသည်။
ပုဂံခေတ်တွင် မွန်လူမျိုးများနှင့် အိန္ဒိယတိုင်းသားများ ပူးပေါင်းမိကြသောကြောင့် မွန်နှင့် အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုများ ရောပြွမ်း စုံလင်လာသည်ဟု မှတ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ အင်းဝခေတ်တွင် အထူးတိုးတက်ခဲ့ကြောင်း လက်ဝဲသုန္ဒရ ဦးမြတ်စံ၏ “သာဓိနပျို့”တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။
↑ ဒဂုန်နတ်ရှင်“မြန်မာ့ရိုးရာလုပ်ငန်း ဆယ်ပွင့်ပန်း”
March 10, 2018 by Leiway, posted in Books
March 10, 2018 March 10, 2018 by Leiway, posted in Myanmar
ကယားပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ တောင်ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်တွင် ကရင်ပြည်နယ်တို့နှင့် ထိစပ်လျက် ရှိသည်။ မြောက်လတ္တီကျု ၁၈ံ၃၀’ နှင့် ၁၉ံ၅၅’ ကြား ၊ အရှေ့လောင်ဂျီကျု ၉၄ံ၄၀’ နှင့် ၉၇ံ၉၃’ ကြားတွင် တည်ရှိသည်။
* လွိုင်ကော်ခရိုင် – လွိုင်ကော်မြို့
* ဘော်လခဲခရိုင် – ဘော်လခဲမြို့
* လောပိတ ရေတံခွန်
ကချင်ပြည်နယ်သည် ၃၄၃၇၉ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းသည်။ လူနေကျဲပါးသော တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိတည်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်များဖြစ်သည့် ခါကာဘိုရာဇီ၊ ဂန်လန်ရာဇီ တို့တည်ရှိသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့ဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။
ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့သည် တိဘက်မြန်မာ အုပ်စုဝင်များ ဖြစ်သည်။ ဂျိန်းဖော့၊ အဇီး(ဇိုင်းဝါး)၊ လရှီ(လာချစ်)၊ လီဆူ၊ ရ၀မ် နှင့် မရူ(လောင်ဝေါ်) မျိုးနွယ် ၆ မျိုးကို စုပေါင်း၍ ကချင်ဟုခေါ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရှမ်းကြီး၊ ရှမ်းတရုတ်၊ ရှမ်းမြန်မာ၊ ဂဒူး စသောမျိုးနွယ်(၄)မျိုးပါဝင်သော ရှမ်းများနှင့် ချင်း၊ ပလောင်၊ နာဂတို့ပါ နေထိုင်ကြသည်။
ကချင်ပြည်နယ်‌၏ မြို့တော်မှာ မြစ်ကြီးနားမြို့ဖြစ်သည်။
ကျေးရွာ အကြီးအကဲ အဖြစ် ကချင်ဒူဝါတစ်ဦး ရှိသည်။ ၎င်း၏ အိမ်ခေါင်း၌ ကျွဲချိုကဲ့သို့သော သစ်ပြားဖြင့် ပြုလုပ်သည့် အိမ်ချိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုများနှင့် ဒူဝါ နယ်မြေများကို အုပ်ချုပ်ရန် ပြည်နယ် အစိုးရက တောင်အုပ်များနှင့် တောင်တန်း ၀န်ထောက်များကို ခန့်ထားပေးသည်။ လုံခြုံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်မှု ကော်မီတီများကိုပါ ယခုအချိန်တွင် တွဲဘက်ပေးထားသည်။ ထုံးစံအရ ရိုးရာဥပဒေများသာ ရှိသည်။ ချိုးဖောက်ပါက ၀ဋ်ကြွေး ပေးဆပ်ခြင်း ပြုရသည်။ `ဖဂါ´ခေါ် လက်ဆောင်အဖြစ် အဖိုးတန်ပစ္စည်း တစ်မျိုးမျိုးကို ကွမ်းဘိုးအဖြစ် ပေးရသည်။ `ဖဂါ´အဖြစ် ကျွဲ၊ မောင်း၊ ငွေ၊ ဖိုခနောက်၊ အ၀တ်အထည်၊ ဓါး၊ လှံ၊ သန္တာပုတီး၊ သေနတ် စသည်တို့ကို အသုံးပြုသည်။
• မြစ်ကြီးနားခရိုင် ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့- မြို့နယ်(၆)မြို့နယ်
• ဗန်မော်ခရိုင် ၊ ဗန်မော်မြို.- မြို့နယ်(၄)မြို့နယ်
• ပူတာအိုခရိုင် ၊ပူတာအိုမြို.- မြို့နယ်(၅)မြို့နယ်
• မိုးညှင်းခရိုင် ၊မိုးညှင်းမြို.- မြို့နယ်(၃)မြို့နယ်
• ဆော့လော်(Saw Law)
• မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သောခါကာဘိုရာဇီတောင်
• အင်းတော်ကြီးအိုင်နှင့် ရွှေမဉ္ဇူဘုရား
ဇန်နဝါရီလ(၄)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ဗြိတိသျှအစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့ သည့်
လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ၆ရက်အကြာ
ဇန်နဝါရီလ(၁၀)ရက်နေ့ကို ကချင်ပြည်နယ်နေ့ သတ်မှတ်ပေးလိုက်သည်။
ထိုနေ့တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ စီတာပူမနောကွင်း၌ နံနက် ၈း၀၀နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသော သမ္မတကြီး ဦးစပ်ရွှေသိုက်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်၍ မနော မဏ္ဍပ်ကြီးဖွင့်လှစ်ကာ ပထမဆုံးသော ကချင်ပြည်နယ်၏ ပြည်နယ်ကောင်စီကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပြည်နယ်ကောင်စီ အစည်းအဝေး၌ ဦးဆမားဒူဝါဆင်ဝါးနောင်အား ကချင်ပြည်နယ်၏ ပထမဆုံးသော ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်လျက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ရှေ့မှောက်တွင်ပင် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုစေခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကျမ်းကို ကချင်ပြည်နယ်၏ ဥက္ကဋ္ဌသစ်ဖြစ်သော ဦးဆမားဒူဝါဆင်ဝါးနောင်၏ လက်သို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးမှ အပ်နှံပေးခဲ့သည်။
ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် မနောပွဲတော်သည် ၁၉၆၂ခုနှစ် တော်လှန်ရေး အစိုးရ တက်လာသည့်အချိန်မှ စပြီး၊ ခေတ်ကာလတစ်ခု မှေးမှိန်သွားခဲ့လေသည်။ ၁၉၉၃ခုနှစ် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရခါစ တစ်ဖန် ကချင်ပြည်နယ်နေ့မနောပွဲတော်ကြီးအား ပြန်လည် ကျင်းပလာခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နှစ်စဉ် ကျင်းပနိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ပေ။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍သာ ကချင်ပြည်နယ်နေ့ မနောပွဲတော်ကြီးအား နှစ်စဉ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်ကျရောက်မည့် ကချင်ပြည်နယ်နေ့သည့် ၆၃ကြိမ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ မနောပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နေ့ဖြစ်သည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇေယျာအောင်မှ ဦးဆောင်ကာ မနောပွဲတော်အား ကျင်းပနေခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ခံ သမိုင်း ကြောင်း
ကချင်လူမျိုးတို့သည် ရှေးပဝေသဏီကစပြီး အရှေ့သံလွင်မြစ် (Sakhkung Hka)၊ အနောက် အိန္ဒိယပြည်၊ ဗြဟ္မာပုတရမြစ်ကြား ယခုတရုတ်ပြည် အနောက်မြောက်၊ တိဘက်အရှေ့မြောက၊် မွန်ဂိုးလီးယားကနေ တောင်ဘက် (လက်ရှိနေထိုင်သည့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်) သုိ့ ဆက်လက်နေထိုင်လာခဲ့သည်။ ယင်းနယ်မြေများသည် ကချင်လူမျိုးစုတို့၏ ဇာတိချက်ကြွေနေရာများပင် ဖြစ်ကာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်။
အင်္ဂလိပ်အစိုးရမှ ကချင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ၁၉၂၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသကို သိမ်းပိုက်ကာ ၁၉၃၀ခုနှစ် မှာတော့ မေခ၊ မလိခ မြစ်ဆုံ တြိဂံဒေသကို သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။
သီးခြားရပ်တည်နေသည့် ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ နယ်မြေဒေသတစ်ခုလုံးကို အင်္ဂလိပ်တို့က Kachin Hill Tract Regulation ဆိုသည့် ဥပဒေ ပြဌာန်းကာ ထိန်းချုပ် အုပ်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့သည်။
ပထမ ကမ္ဘာစစ် (၁၉၁၄-၁၉၁၈)ခုနှစ်တွင် အီရတ်စစ်မြေပြင်၌ အင်္ဂလိပ်ဘက်မှ ကချင်စစ်သား ၄၀၀ကျော် ပါဝင်တိုက်ခိုက် ကူညီခဲ့သည်။ စစ်ပြီးနောက် ၁၉၂၅ခုနှစ်တွင် ဆရာဦးမရမ် ရိုဘင်နှင့် ဒူဝါဇော်တူးတို့က မြစ်ကြီးနားနှင့် ဗန်းမော်မှ ကချင်ကိုယ်စားလှယ် ၅၅ဦးကို ဦးဆောင်၍ ဘုရင်ခံ ဆာကုတ်ဘတ္တာလာထံ ကချင်တောင်တန်းဒေသကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရန် ပထမဦးဆုံးတောင်းခံခဲ့သည်။ သို့သော် ကချင်ခြေလျင်တပ် သုံးတပ်သာ ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် (၁၉၄၂)ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဂျပန်စစ်တပ်များ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ကို အင်္ဂလိပ်နှင့် အမေရိကန်စစ်တပ်ပေါင်းကာ ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ပွဲ၌ ကချင် စစ်တပ်သားများသည် Northern Kachin Levis (N.K.L)၊ V_Force၊ Chindit နှင့် American-Kachin Ranger တပ်ဖွဲ့များဖြင့် ပါဝင်ကူညီခဲ့သည်။
၁၉၄၄ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၃)ရက်နေ့တွင် N.K.L၊ V_Force၊ Chindit စစ်တပ်သားများသည် မြစ်ကြီးနားရှိ ဂျပန်တပ်သားများအား အမြစ်ပျက် ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့သည်။ American-Kachin Ranger စစ်တပ်ဖွဲ့သည် တရုတ်ပြည် ယူနန်ပြည်နယ်ထဲထိ ဂျပန်စစ်တပ်အား တိုက်ခိုက် အောင်ပွဲခံခဲ့ကာ ယခု Ying Jiang မှာ အထိမ်းအမှတ် အဖြင့် ကျောက်တိုင် စိုက်ထူထားသည်။
ဆက်ပြီး အောက်မြန်မာပြည်၌ ကချင်စစ်တပ်ပါသည့် အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်သားနှင့် Force 136 တို့မှ ကူညီသဖြင့် ၁၉၄၅ခုနှစ် သြဂုတ် (၁၄)ရက်နေ့ ဂျပန်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ အပြီးတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
စစ်တိုက်ပြီး အောင်ပွဲခံပြန်လာခဲ့ကြသည့် ကချင်စစ်တပ်သားများသည် ကချင်ပြည်သူလူထုနဲ့ အတူ မြစ်ကြီးနား၊ စီတာပူရပ်ကွက်တွင် သြဂုတ် (၁၄-၁၉) ရက်ကြား ၆ ရက်တိတိ “အောင်ပွဲခံ မနော” (Padang Manau) ပွဲကြီး ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ (ယခုကျင်းပသည့် စီတာပူ မနောကွင်းကြီး မရှိသေး။) ရန်ကုန်ရှိ အင်္ဂလိပ် ဒုတိယ ဘုရင်ခံ Sir. Dorman Smith လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
ထိုပွဲတွင် ကချင်လူမျိုးတို့သည် ဒုတိယအကြိမ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပြည်နယ်သတ်မှတ်ပေးရန် ထပ်မံ တောင်းဆိုသည်။ ဘုရင်ခံမှ ပြည်နယ်သတ်မှတ်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည့်အပြင် “နင်တို့ဂျိမ်းဖော (ကချင်) တွေက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ဖို့ ပညာမစုံသေးဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဗမာကို လွတ်လပ်ရေးပေးပြီး နင်တို့ ဂျိမ်းဖော့တွေကို ချန်ထားလိုက်အုံးမယ်။ စိုက်ပျိုးရေးပညာ၊ ကျန်းမာရေးပညာတွေ သိလာအောင် အရင်သင်ပေးမယ်။ နင်တို့ ပညာစုံရင်၊ နင်တို့ နယ်မြေ၊ နင်တို့လက်ထဲ ပြန်အပ်ပေးမယ်။” ဟု ပြောခဲ့သည်။
တတိယအကြိမ်ဖြင့် ၁၉၄၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလဆန်း (၂)ရက်နေ့၊ မန်ခိန်ရပ်ကွက်၌ နယ်ခြားဒေသ ဆိုင်ရာ တောင်တန်းမင်းကြီး Mr.H.N.C. Stevenson ထံ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် Mr.H.N.C. Stevenson က ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
ဖဆပလ (ဖက်ဆစ်ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့) ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အင်္ဂလန်ရှိ အင်္ဂလိပ်အစိုးရထံ ဗမာပြည်မနဲ့အတူ တောင်တန်းဒေသတွေ လွတ်လပ်ရေး လိုချင်သည်ဟု တောင်းဆိုခဲ့ရာ အစိုးရမှ ပြည်မနဲ့ တောင်တန်းသားတွေ ဘဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ပြီးယူခဲ့ဟု ဆို၍ ဗိုလ်ချုပ်ပြန်လာခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၁၉၄၆ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားများအား “Federal ပြည်ထောင်စု စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သွားမည်ဟု အမျိုးသား တန်းတူညီမျှရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား ကချင်ခေါင်းဆောင်များမှ “ခင်ဗျားတို့ ဗမာတွေက၊ နေရာတိုင်းမှာ အရင်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့အတွက်၊ ငါတို့က ဘာမှမသိသေးတဲ့ ဂျိမ်းဖော့ (ကချင်)တွေ ညီအစ်ကိုရင်းပမာ ပံ့ပိုးပေးကြပါ။” ဟု ဆိုကာ ကချင်ခေါင်းပေါင်း ပေါင်း၊ ကချင်လွယ်အိတ်နဲ့ ဓါးလွယ် လွယ်ပေးကာ၊ ကချင်အမျိုးသမီး ၆ဦးဖြင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
အင်္ဂလိပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအား ပြည်ထောင်စု ပုံစံဖြင့် လုံးဝလွတ်လပ်ရေးပေးရန် သဘောတူကြောင်း အတည်ပြုသည့် ‘အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်’ ကို ၁၉၄၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၇)ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုလိုက်ရတော့သည်။
၁၉၄၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၂၉)ရက်နေ့ မြစ်ကြီးနား၌ ကချင်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များစုဝေးကာ ပင်လုံစည်းဝေးသွားရန် ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မြစ်ကြီးနား မှ ခေါင်းဆောင် (၈)ဦးနှင့် ဗန်းမော်မှ ခေါင်းဆောင် (၄)ဦးသွားရောက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၇ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက် နံနက် ၁၁း၀၀နာရီ အချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်ကာ အခြားဗမာခေါင်းဆောင်များနှင့်တူ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ချင်းကိုယ်စားလှယ်များများအားလုံး ပင်လုံညီလာခံ စတင်လာခဲ့သည်။
ဘာသာစကားမှာ ဂျိန်ဖော့စကား၊ မရူစကား၊ ရ၀မ်စကား၊ လီဆူစကား ဟူ၍ စကားကြီး (၄)မျိုးရှိပြီး လရှီစကား နှင့် အဇီးစကားတို့မှာ မရူစကားမှ ခွဲထွက်လာသော စကားများ ဖြစ်သည်။ ဂျိန်ဖော့စကားကို လူသုံးများဆုံး ဖြစ်သည်။ မရူစကားမှာ ဒုတိယအများဆုံး ဖြစ်သည်။
ကချင်တိုင်းရင်းသားများက အမဲရောင်ဝတ်ပြီး ရ၀မ်တိုင်းရင်းသားများက အဖြူရောင် ၀တ်သည်။ လရှီ၊ လီဆူ နှင့် အဇီးတို့က ခေါင်းပေါင်းကို ထူထူထည်းထည်း ပေါင်းထုပ်သဘွယ် ပေါင်းကြ၍ ဂျိန်ဖော့နှင့် မရူတို့က ပါးပါးပေါင်းကြသည်။ မြောက်ပိုင်းနေ တိုင်းရင်းသားများက လုံကွင်းကို တိုတိုဝတ်ကြ၍ တောင်ပိုင်းနေ တိုင်းရင်းသားများက လုံကွင်းကို ရှည်ရှည်ဝတ်ကြသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူများ၊ နတ်ကိုးကွယ်သူများဟူ၍ ရှိကြသည်။ ဘာသာကိုးကွယ်သူများသည် သက်ဆိုင်ရာဘာသာကို လေးစားသမှု အထူးရှိကြသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် နတ်ကိုးကွယ်သူ များပြားသည်။ နတ်ကိုးကွယ်မှုမှာ အဓိကဖြစ်သည်။ နတ်များကြေနပ်မှုရစေရန် အရေးကြီးသဖြင့် ယဇ်ကောင်များဖြင့် နတ်များကို ပူဇော်ပသရသည်။ ရွာအ၀င်တွင် ကျေးရွာဆိုင်ရာ နတ်ကွန်းများ တွေ့နိုင်သည်။ နှစ်စဉ် နတ်ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပချိန်တွင်သာ မွမ်းမံလေ့ရှိသည်။ အမြဲထိန်းသိမ်း ထားလေ့ရှိသော နတ်ကွန်းမှာ မြေနတ်၏ နတ်ကွန်းဖြစ်သည်။ ယင်းနတ်ကွန်းကို ကျောက်တုံးများဖြင့် ၀ိုင်းရံထားခြင်း၊ ၀င်းခတ်ထားခြင်းများ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ အိမ်များတွင် နတ်ကွန်းကို အိမ်ရှေ့၌ထားပြီး နတ်စင်ကို အိမ်ဦးခန်း၌ ထားသည်။ အချို့ကျေးရွာ အိမ်များတွင် ရှေးယခင်ကတည်းက ပူဇော်ခဲ့သော ယဇ်ကောင်များ၏ ခေါင်းခွံများ ဆင့်ကဲ ချိတ်ဆွဲထားသည်ကို တွေ့ရပေမည်။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ကျန်းမာရေးသည် နတ်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။ မကျန်းမာလျှင် နတ်ဟောဆရာထံ မေးမြန်း၍ သက်ဆိုင်ရာနတ်တို့အား ပူဇော်ပသ ရသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများပင်လျှင် ကြွေးခံ၍ နတ်ကတော့ရသည်။ နတ်ဆရာများသည် ဘာသာရေးတွင်သာမက လူမှုရေးတွင်ပါ အရေးပါသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြသည်။ အတိတ်နမိတ်ကောင်ခြင်း၊ အဆောင်များထားခြင်းတို့ကို ပြုတတ်၍ စုန်းများရှိပြီး ပြုစားတတ်သော အတတ်ပညာများ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ မဒိုင်နတ်ခေါ် ကောင်းကင်နတ်ကို မူတည်၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်`မနောပွဲ´ကျင်းပကြသည်။
အရေးကြီးသော မနောပွဲ(၅)မျိုး ရှိသည်။
• ပဒန်မနော(Padang MaNaw)
• ဆွတ်မနော(Sut MaNaw)
ဓနဥစ္စာ တိုးတက်ချိန်၌ မနာလို ၀န်တိုမှုများရှိ မရှိ၊ ပေးဆပ်ရန်ကြွေး ရှိ မရှိ၊ ရယူရန်ကြွေးရှိ မရှိ၊ စုံစမ်းရင်း ဆွေသစ်မျိုးသစ် မိတ်သင်္ဂဟသစ် ဖွဲ့သောပွဲ။
• ဂျူမနော(Ju MaNaw)
မကျန်းမာသည့်အခါ နှင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော အဖိုးအို၊ အဖွားအိုများ သေဆုံးသောအခါ ကျင်းပသောပွဲ။
• ဂွမ်ရမ်မနော( Gumran MaNaw)
အိမ်သားဖြစ်သူ ညီအစ်ကို တစ်ဦးဦး နယ်မြေသစ် တည်ထောင်နေထိုင်သော အချိန်တွင် မဒိုင်နတ်ကို ဝေချမ်း ပင့်ဆောင်ယူသော အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် ကျင်းပသောပွဲ။
• ရှဒပ်မနော(Shadip MaNaw)
နယ်မြေသစ် တည်ထောင်ပြီး မဒိုင်နတ်အား နေရာပြသော အထိမ်းအမှတ်၊ နယ်မြေသစ်ရှိ မကောင်းဆိုးဝါးများကို နှင်ထုတ်သော အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် ကျင်းပသောပွဲ။
မနောပွဲအပြင် အိမ်သစ်တက်ပွဲ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၊ အသုဘပွဲ၊ နတ်ပူဇော်ပွဲ နှင့် ကောက်သစ်စားပွဲ စသော အခြားပွဲလမ်းများလည်း ရှိသေးသည်။
ဖါးကန့်၊ လုံးခင်း၊ တောမှော်နှင့် ဟောင်ပါးဒေသတို့မှ အဖိုးတန် ကျောက်စိမ်းများ ထွက်ရှိသည်။